Ikhomishana kaZondo izogoqa umsebenzi ngoMandulo - Ilanga News
Home Izindaba Ikhomishana kaZondo izogoqa umsebenzi ngoMandulo
Ikhomishana kaZondo izogoqa umsebenzi ngoMandulo
UVEZE ukuthi bekungesona isifiso sakhe ukuba udaba lokugoloza kukaMnu Jacob Zuma ukuvela esigcawini sokuqhwagwa kwama-ndla ombuso yindlazana – angusihlalo waso – lufinyelele esinqumeni sokugwetshwa kwakhe umahluleli uMnu Raymond Zondo (osesithombeni).
Kuqopheke umlando ngoLwesibili iNkantolo yoMthethosisekelo igweba uMsholozi izinyanga ezi-wu-15 ngokudelela umyalelo wayo, yamnika ithuba lezinsuku eziwu-5 ukuba azinikele emaphoyiseni aseNkandla noma awaseGoli.
Kungokokuqala ukuthi umuntu owayengumengameli eNingizimu Afrika agwetshwe yinkantolo ukubhadla ejele.
Ekhuluma izolo ngoLwesitha-thu uMnu Zondo – oyiphini lenhlo-ko yamajaji – uveze ukuthi uyasamukela isigwebo, kodwa ubengafisi ukuthi kufinyelele kulesi siphetho.
Uthe isinqumo senkantolo si-khombise ngokusobala ukuthi umthetho usekhona eNingizimu Afrika futhi akekho umuntu ongaphezulu kwawo.
“Isigcawu senze obekumele si-kwenze emuva kokuba kusicacele ukuthi uMnu Zuma akazimisele ngokuhlonipha imiyalelo yenka-ntolo yokuba aqhubeke nokuvela kulesi sigcawu nakuba efake isicelo sokubuyekeza isinqumo saso,” kusho uMnu Zondo.
Uthe uMnu Zuma ubekwazi obekumele akwenze ngesikhathi enquma ukudikila ukuvela kulesi sigca-wu.
Uveze ukuthi ukungaveli kwakhe kulesi sigcawu ngeke kuphazamise izethulo zaso nje-ngoba enikeziwe isikhathi sokuthi ayoziphendulela ngezinsolo abenanyekwa zona futhi enelungelo lokupheka ngemibuzo abebe-msola.
“UMnu Zuma unayo imiqingo yobufakazi bezinsolo athinteka kuzona ebiqhamuka kofakazi abehlukene, ngakho kube kuyena ukungalisebenzisi ilungelo lakhe,” kusho uMnu Zondo.
Uthe emuva kwalesi sinqumo, akukho okutheni angakusho ngaphandle kokuthi isigcawu silandele imigudu efanele, eha-mbisana noMthethosisekelo wezwe.
Ngaphandle kokuphawula ngodaba lokugwetshwa kukaMnu Zuma, uMnu Zondo uphawule ngomsebenzi osuwenziwe yisi-gcawu asiholayo kusukela saqala ukwenza umsebenzi waso ngoNcwaba (August) 2018.
Uveze ukuthi kusukela saqala sesibone ofakazi abangaphezulu kuka-330 abaqhamuka ezinhlakeni ezahlukene.
Ukwamukelile ukuthi sesidonse isikhathi eside njengoba kwaku-mele siphothule umbiko waso ngoNdasa (March) nonyaka kodwa sacela ukwengezelwa isikhathi njengoba sekulindeleke siphothule ngoMandulo (September) nonyaka.
“Ngingathanda ukuthi siphothule konke ngoNcwaba nonyaka, kodwa ngenxa yezihibe ezibuye zibe khona, yingakho sabeka uMandulo njengomnqamulajuqu,” kusho uMnu Zondo.
Uveze ukuthi sekusele ofakazi abawu-6 – okubalwa noMengameli Cyril Ramaphosa – ngaphambi kokuba kuphothulwe ukwethulwa kobufakazi.
Uthe babeke uNtulikazi (July) ukuthi labo fakazi bavele, bese kuthi ngoNcwaba kugoqwe osekuvele sekuqaliwe.
Previous articleIshayekile iRBM ngenxa yodungunyane
Next articleUZuma ngeke aphucwe imihlomulo